Princess Cruises icheka Australia & New Zealand kusvika Ndira 27, 2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Princess Cruises icheka Australia & New Zealand kusvika Ndira 27, 2022
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • New Zealand Kupwanya Nhau • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Princess Cruises inoenderera mberi nehurongwa hwekutangazve kufamba muUnited States
Nhau dzakaipa dzinoenderera mberi kune indasitiri yezvikepe uye yevatakuri muAustralia kana New Zealand, kana avo vaida kuisa pasi pasi munzira yekufamba kwechikepe kuri kuenderera mberi, zvirinani kusvika muna Ndira 27. Zvinoreva kuti hakuna kuenda kuAustralia neNew Zealand paPrincess. Cruises uye pamwe vamwe.
Princess Cruises iri kuwedzera kumbomira kwayo mukuzorora kwechikepe muAustralia / New Zealand kusvika Ndira 27, 2022,
Izvi zvinokonzerwa nekusava nechokwadi kwakatenderedza kudzoka kwekufamba munzvimbo.
Nekuda kwekumiswa kwekumbomira, Coral Princess nzendo kusvika muna Ndira 17 dzakadzimwa uye Royal Princess uye Sapphire Princess mwaka kusvika munaKurume 2022 zviri kudzimwa.
"Zvakava pachena kuti hatizokwanise kuendesa Royal Princess neSapphire Princess kuAustralia vasati vatanga rwendo rwavo rwakaburitswa kuchamhembe kwenyika," akadaro Deanna Austin, Princess Cruises Chief Commerce Officer. "Tinoziva kuti vaenzi vari kuronga rwendo panguva yezororo yezhizha uye yegore idzva vachanyadziswa neshanduko, zvisinei, isu taida kupa vaenzi chiziviso chakawanda kuitira kuti vagone kuronga mazororo avo zvine chokwadi."
Kune vashanyi vakavakirwa parwendo rwakadzimwa, vashanyi vane mukana wekutamira kune yakaenzana rwendo. Iyo rebooking maitiro ichave iine yakawedzera bhenefiti yekudzivirira yevaenzi mari yavo yekutsiva cruise. Neimwe nzira, vashanyi vanogona kusarudza ramangwana cruise kiredhiti (FCC) yakaenzana ne100% yebhazi rebhazi rakabhadharwa pamwe nebhonasi yekuwedzera isingadzoreke FCC yakaenzana ne10% yemari yechikepe yakabhadharwa (idiki $ 25 USD) kana kudzoreredzwa kuzere kwepakutanga. fomu yekubhadhara.
Princess achadzivirira vanofambisa vamiririri pakumisheni yakabhadharwa zvakazara mukucherechedza iro rakakomba basa ravanotamba mubhizinesi reruzivo uye kubudirira.
Ruzivo rwechizvino-zvino uye mirairo yevakashanyira vashanyi vanokanganiswa nekukanzurwa uku, uye rumwe ruzivo nezveFCCs uye kudzoreredzwa, zvinogona kuwanikwa online pa Ruzivo nezve Yakakanganiswa & Yakadzimiswa Cruises.